Yangu iPhone Screen Iri Dema! Heino Chikonzero Chaicho Nei. - Iphone
maitiro ekufananidza manotsi neitunes
iphone yangu haina kunhonga wifi
iphone 6 bhatiri rinoburitsa nekukurumidza
mashandisiro ekuti uwane yangu iphone pane macbook
Yako iPhone iri, asi iyo skrini yakasviba. Yako iPhone inorira, asi haugone kupindura iyo kufona. Wakaedza kumisazve yako iPhone, uchiisiya ichipera bhatiri uye kuibaya zvakare mukati, uye yako iPhone skrini iri ichiri nhema . Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone skrini yakaenda nhema uye zvaunogona kuita kuti ugadzirise.
Nei Yangu iPhone Chino Screen Nhema?
Chidzitiro chitema chinowanzo kukonzerwa nedambudziko rehardware ne iPhone yako, saka kazhinji kazhinji hakusi kwekukurumidza kugadzirisa. Izvo zvataurwa, kuparara kwesoftware unokwanisa kukonzera kuti yako iPhone iratidze kutonhora uye kuita nhema, saka ngatiedzei zvakaoma reset kuti tione kana zviri izvo zviri kuitika.
Kuti uite reset rakaoma, tinya uye ubatise iyo bhatani remagetsi (inozivikanwawo se Kurara / Wake bhatani) uye iyo Bhatani repamba (bhatani rakatenderera pazasi pechiratidziro) pamwechete kwemaminitsi gumi.
Pane iyo iPhone 7 kana 7 Plus, iwe unoita reset rakaoma nekudzvanya uye kubata iyo vhoriyamu pasi bhatani uye iyo bhatani remagetsi panguva imwechete kusvikira iwe ukaona iyo Apple logo ichioneka pachiratidziri.
Uye kana iwe uine iPhone 8 kana nyowani, ita yakaoma reset nekukurumidza kudzvanya uye kuburitsa vhoriyamu kumusoro bhatani, nekukurumidza kudzvanya uye kuburitsa vhoriyamu pasi bhatani, uye nekudzvanya uye kubata iro bhatani remagetsi (iPhone 8) kana bhatani repadivi (iPhone X kana nyowani) kusvikira iyo logo yeApple yaonekwa.
Kana iyo logo yeApple ikaonekwa pachiratidziri, panogona kunge pasina dambudziko ne iPhone yako Hardware - yaive kuparara kwesoftware. Tarisa uone yangu imwe chinyorwa pa chando iPhones , iyo inokuudza chaizvo zvekuita kugadzirisa yako iPhone. Kana iyo Apple logo isingaoneke pachiratidziri, ramba uchiverenga.
Ngatitorei Kutarisa Mukati me iPhone Yako
iPhone Logic Bhodhi
Kuratidzwa kupfupi kwemukati me iPhone yako kunokubatsira kuti unzwisise kuti nei skrini rako rakasviba. Pane zvidimbu zviviri zvehardware zvatichataura nezvazvo: Yako iPhone kuratidza uye iyo logic bhodhi .
Iyo logic board ndeye huropi kuseri kwekushanda kweiyo yako iPhone, uye chikamu chese che iPhone yako chinobatana kwachiri. Iyo kuratidza inokuratidza mifananidzo yaunoona, asi iyo logic bhodhi anozvitaura chii kuratidza.
Kubvisa iPhone Ratidza
Iyo yose kuratidzwa kwe iPhone yako inobviswa, asi yakanyanya kuomarara kupfuura zvaunogona kufunga! Pane zvinhu zvina zvakakosha zvakavakirwa mune yako iPhone kuratidza:
Iyo LCD skrini, iyo inoratidza mifananidzo yaunoona pane yako iPhone.
Iyo digitizer , inova chikamu chechiratidziro chinoita kubata. It digitize chigunwe chako, zvinoreva kuti chinoshandura kubata kwechigunwe chako kuita mutauro wedhijitari iyo yako iPhone inogona kunzwisisa.
Iyo yekumberi-yakatarisana kamera.
Chikamu chimwe nechimwe chekuratidzwa kwe iPhone yako chine paradzana chinongedzo chinobaya mu iPhone yako logic board. Ndosaka iwe uchikwanisa kusvetuka uchiyambuka chidzitiro nemunwe wako, kunyangwe iyo skrini iri nhema. Iyo digitizer iri kushanda, asi iyo LCD haisi.
Iyo tsvimbo nhema iri kubata iyo inoratidza dhata yekubatanidza
Muzviitiko zvakawanda, yako iPhone skrini yakasviba nekuti tambo inosanganisa iyo LCD kune iyo logic bhodhi yasunungurwa. Iyi tambo inonzi iyo ratidza chinongedzo che data. Kana chiratidziro chedata chinoburitswa kubva mubhodhi rekunzwisisa, yako iPhone inogona kugadziriswa nekuibaya zvakare.
Kune zvimwe zviitiko apo gadziriso isiri yakapusa, uye ndipo apo iyo LCD pachayo yakakuvara. Kana izvozvo zvikaitika, hazvina basa kuti LCD yakabatana neiyo logic board kana kwete - yatyoka uye inoda kutsiviwa.
Ndinoziva Sei Kuti Ini Ratidziro Yangu Yakaburitswa Kana Yakaputswa?
Ndiri kuzeza kunyora izvi nekuti hazvisi mutemo wakaomarara uye unokurumidza, asi ini have ndakaona muenzaniso mune yangu ruzivo ndichishanda nePhones. Iko hakuna vimbiso, asi mutemo wangu wechigunwe ndeuyu:
iphone 5s imessage isiri kushanda
Kana yako iPhone kuratidza yakamira kushanda mushure wakazvidonhedza , yako skrini ingangove nhema nekuti iyo tambo yeLCD (ratidza dhata yekubatanidza) yaburitswa kubva kune iyo logic board.
Kana yako iPhone kuratidza yakamira kushanda mushure yakanyorova, sikirini yako ingangove nhema nekuti iyo LCD yakaputsika uye inoda kutsiviwa.
Maitiro Ekugadzirisa Iyo Nhema iPhone Screen
Nzira iyo iwe yaunosarudza kuenderera inogona kuenderana nekuti yako iPhone LCD tambo yadzingwa kubva kune iyo logic board kana kana iyo LCD yakaputsika. Unogona kushandisa mutemo wangu kubva kumusoro kuita fungidziro yakadzidza.
Kana iyo tambo yeLCD yabviswa, iyo Genius Bar paApple Chitoro Chivabvu igadzirise mahara, kunyangwe kana yako iPhone iri kunze kwegwaro. Izvi zvinodaro nekuti gadziriso iri nyore: Vachavhura yako iPhone vobva vabatanidzazve iyo digitizer tambo kune iyo logic board. Kana iwe ukafunga kuenda nenzira iyi, ita musangano neGenius Bar usati wasvika - zvikasadaro, unogona kupedzisira wamira wakakomberedza kwechinguva.
Kana iyo LCD yakaputsika, ndiyo imwe nyaya. Zvinogona kudhura zvakanyanya kugadzirisa yako iPhone kuratidza, kunyanya kana iwe ukapfuura neApple. Kana iwe uchitsvaga yepamusoro-soro, imwe-isingadhuri imwe nzira, ini ndinokurudzira Pulse , iri-yemunhu yekugadzirisa sevhisi ichauya kwauri, gadzirisa yako iPhone ipapo, uye ndokupa warandi yeupenyu.
Kana iwe uchida kuwana iPhone nyowani pane kuti yako yazvino igadziriswe, tarisa iyo UpPhone foni yekuenzanisa chishandiso . Iwe unogona kuenzanisa mitengo yeese smartphone pane yega isina waya inotakura. Vatakuri vane shungu dzekuti iwe uchinjise kune yavo network, saka iwe unogona kuona kuti iwe unogona kuwana iyo nyowani iPhone yeyakaenzana iwo mutengo wakaenzana nekugadzirisa yako yazvino.
Kugadzirisa Yako iPhone Pachezvako Kazhinji Haisi Ipfungwa Yakanaka
Nyeredzi-dzakaumbwa (pentalobe) screws chengeta yako iPhone yakavharwa
iPhones haina kuitirwa kuti ivhurwe nemushandisi. Ingotarisa iwo maviri screws padyo nechaji chiteshi cheiyo yako iPhone - ivo vane nyeredzi-dzakaumbwa! Izvo zvichitaurwa, ipapo vari yakanakisa magadziriso ekugadzirisa kunze uko kana iwe uchinzwa kuda. Ndakatora mifananidzo iri muchinyorwa ichi kubva kugadziriso gwaro pane iFixit.com inonzi iPhone 6 Yepamberi Panel Gungano Replacement . Heino chidimbu chipfupi chechinyorwa icho icho chingaite kunge chakajairika:
“Paunobatanidzazve foni yako, tambo yedata yekuratidzira inogona kubva pane chinobatanidza. Izvi zvinogona kukonzera mitsetse chena kana isina chinhu skrini paunodzosera foni yako pairi. Kana izvozvo zvikaitika, tangazve tambo yesimbi nefoni kutenderera foni yako. ” Kunobva: iFixit.com
Kana iwe uchitenda yako iPhone LCD tambo (ratidza data tambo) yakangodzingwa kubva kune iyo logic board, iwe uri tech-savvy, uye kuenda kuApple Chitoro haisi sarudzo, kubatanidza iyo yekuratidzira data tambo kune iyo logic bhodhi haisi izvo zvakaoma, kana iwe uine chaicho maturusi.
Kutsiva kuratidzwa kuri chaizvo yakaoma nekuda kwenhamba yezvinhu zvinobatanidzwa. Rega ndive akajeka: ini USA zvinokurudzira iwe edza kugadzirisa dambudziko iri iwe, nekuti zviri nyore kwazvo kutyora chimwe chinhu uye 'zvidhinha' yako iPhone.
Iwe Unoziva Zvaunofanira Kuita
Vaverengi vazhinji havazokwanise kugadzirisa yavo iPhone skrini kungoverenga ichi chinyorwa, nekuti dema iPhone skrini kazhinji haina kukonzerwa nesoftware nyaya. Zvese zvaive zvichishanda mushe kusvika yako iPhone skrini yaenda nhema. Iye zvino haugone kushandisa yako iPhone zvachose, asi iwe ita ziva zvekuita zvinotevera. Ndiri kufarira kunzwa kuti wakagadzirisa sei iPhone yako muchikamu chemashoko pazasi, uye chero chiitiko chaunogona kupa chinobatsira pasina mubvunzo vamwe vaverengi vane dambudziko rakafanana.
Kutenda nekuverenga uye zvese zvakanakisa,
Zvese Mifananidzo ye iPhone muchinyorwa chino na Walter galan uye rezinesi pasi CC BY-NC-SA .